किन खुइलिन्छ मान्छेको तालु? जानी राख्नुस - inaruwaonline.com
किन खुइलिन्छ मान्छेको तालु? जानी राख्नुस
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कार्तिक १०, २०७२ समय: २:३४:५९
काठमाडौँ । समाजमा भाग्यमानी अथवा बुद्धिमानी मान्छेको तालु खुइलिन्छ भन्ने आम मान्यता रहेको छ, जुन विज्ञानले आज सम्म पनि पुष्टि गर्न सकेको छैन । तर वैज्ञानिकहरुले मान्छेको शरीरमा रौँ कसरी उम्रिन्छ, किन पातलो हुन्छ, र किन झर्छ भन्नेचाहिं पत्ता लगाएका छन् ।
महिलाहरुको शरीरमा पनि करिब १८-३० बर्षको अवस्थामा केही मात्रामा Testosterone Hormone हुन्छ, तर त्यसपछि बिस्तारै घटेर एकदम कमहुँदै जान्छ। त्यसैले पुरुषको जस्तोगरी कपाल खुइलींदैन। खुइले टाउको हुने ७ जना पुरुषमध्ये ४ जना वंशानुगत कारणले तालुखुइले हुन्छन, अनि ६० बर्ष पुग्दानपुग्दै ७०% पुरुष तालुखुइले बन्दछन्।हाम्रो सन्देशबाट